Momba anay - Changzhou Sunrise Steel Ball Co., Ltd.
Ny orinasan-tsolika vy amin'ny fiposahan'ny masoandro dia naorina tamin'ny taona 1992. Izahay manokana amin'ny famokarana vy vy sy ny fikarohana sicentific ary ny varotra commeicial.
Nandritra ny taona maro, miorina amin'ny fototry ny wujin Metallic Ball Institute, dia manolo-tena tsy tapaka ho an'ny fikarohana sy ny fampiroboroboana ny thchnique vita amin'ny vy vy izahay ary mamokatra baolina vy matetika toy ny baomba vy chrome (aisi52100), baomba vy (aisi1015) vy vy baolina (aisi304.316.420.440c) .Ireo baolina ireo dia be mpampiasa amin'ny fiara fitaterana, fitaovana elektrika, lalamby firavaka sns.
Nandritra ny taona maro, nanolo-tena izahay tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia famokarana baolina vy mifototra amin'ny Wujin metal ball Research Institute. Izy io dia mamokatra vy chromium 1-16mm amin'ny ankapobeny (aisi52100), baolina vy mitondra vy, vy vy (aisi1015.1045.1085), baolina vy tsy misy fangarony (aisi304.316.420.440c), baolina vy, vy varahina ary baolina metaly hafa. Ampiasaina be izy io amin'ny bearings, fiara, fitaovana elektrika, lalamby mpitari-dalana, baoritra baolina ary vokatra hafa. Izy io dia atokisan'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany. Mandritra izany fotoana izany dia mamokatra baolina saucer manidina sy fampiasana baolina vy miendrika manokana koa izy.
Traikefa amin'ny indostria
Namolavola teknolojia fitsaboana hafanana mitambatra tsy manam-paharoa, avy amin'ny sary tariby, seranana mangatsiaka, baolina malama, fitsaboana hafanana, fikolokoloana, famaranana, famolavolana, fanadiovana ho an'ny fanaraha-maso, fonosana, ary andiana fizotran'ny vokatra vita vita hatramin'ny famaranana ny varotra baolina.
Izy io dia afaka mizaha toetra ny karazana singa simika, ny toetra mekanika ary ny fikambanana anatiny eo ambanin'ny fenitra ISO17025. Hamarino fa ny sampana manome toky momba ny kalitao dia afaka mahazo fanamarinana angon-drakitra henjana sy marina amin'ny fizotry ny famokarana rehetra manomboka amin'ny akora miditra amin'ny ozinina ka hatramin'ny fanaterana ny vokatra, ary manome fanangonana data tsy tapaka ho an'ny departemanta teknika sy ny mpanjifa ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ireo fitaovana vaovao. ary fizotra vaovao.
Ny tsipika famokarana baolina vy 4 dia fehezin'ny solosaina avokoa. Noho ny fihenan'ny fidirana an-tsehatra amin'ny tanana sy ny fanodinana dingana, ny kalitaon'ny vokatra dia miorina tsara na dia amin'ny andiany samihafa aza. Ny fampiasana ny vokatray dia afaka mifanaraka tsara amin'ny zavatra takinao.
Famaritana ny rafitra kalitao
Miaraka amin'ny rafitra fitantanana tena ekena, nandalo fanamarinana iraisam-pirenena sy indostrialy efa ho 30 izahay, toy ny ISO9001, NQA ISO14001, OHSAS18001, BV, sns. Mandritra izany fotoana izany, ny rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny vokatra isan-karazany dia nojeren'ny Siemens, GE ary orinasa 500 hafa.
Ball varahina 3mm, Ball varahina, Ball varahina matevina, Ball varahina matanjaka, 3mm Ball varahina, Ss304 Steel Ball,